Taitra sy gaga ny Sendikàn’ny mpitsara: nahazo LP ilay tale nampidirina am-ponja iray andro | NewsMada
Taitra sy gaga ny Sendikàn’ny mpitsara: nahazo LP ilay tale nampidirina am-ponja iray andro
Par Taratra sur 29/07/2017
Manjavozavo tanteraka . Nahazo fahafahana vonjimaika (LP) rehefa notanana vonjimaika (MD) iray andro teny Antanimora, ilay tale eo anivon’ny Fitsinjaram-pahefana, ahina ho nanodinkodim-bolam-panjakana.
Misy majika eo amin’ny fitsarana ? Niakatra ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (CPAC), tetsy 67 ha ity tompon’andraikitra ambony ity ny alatsinainy teo, nofotorina momba izany raharaha izany. Ahina ho mpiray tendro amin-dRazaimamonjy Claudine koa ny tenany ka nampidirina am-ponja vonjimaika, taorian’ny fanadihadiana. Nivoaka avy hatrany anefa ity tale ity ny ampitson’io (talata 25 jolay) rehefa nahazo LP. Tsy mazava hatreto ny antony nahazoany izany tampoka indray. Anisan’ny namotorana azy ny fanahiana ho nanodinkodina ny vola tokony hanampiana ny kaominina any amin’ny distrikan’Analalava. Mitentina hatrany amin’ny 190 tapitrisa Ar zany ary tokony ho hanavaozana kianja filalaovana baolina kitra any an-toerana.
Naneho ny heviny avy hatrany ny teo anivon’ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM), tamin’ny alalan’ny filohany, Faniry Ernaivo. “Tena nahagaga anay izany fanapahan-kevitra izany… Na izany aza, tokony hitondra fanazavana ho an’ny rehetra momba izao raharaha izao ny mpitsara fa tena tsy nampoizinay”, hoy izy.
Manambady loholona ary akaikin’ny vadin’ny mpitondra
Anisan’ny manaitra amin’ity raharaha ity ny tsy tokony hahazoan’ny olona ahina ho nanodinkodim-bolam-panjakana LP izany mihitsy, mandra-pahatongan’ny raharaha eny anivon’ny fitsarana. Efa nanamafy izany ny eo anivon’ny SMM, ka anisan’ny tsy nahazoan-dRazaimamonjy LP izany na efa nangataka aza ny mpisolovava azy.
Manoloana izany, nisy tsindry avy aiza na lava tanana niditra amin’izao raharaha izao ka nahazoan’ity tale ity nahazo LP ? Tsy mitombina ny vesatra niahiahiana azy ? Inona anefa ny nandefasana MD azy raha izany ? Etsy andaniny, voalaza fa manambady loholona ity tale ity ary akaiky ny vadin’ny mpitondra. Misy ifandraisany izany ?
Tsiahivina fa efatra ireo niakatra tetsy amin’ny CPAC ny fiandohan’ity herinandro ity. Nahazo LP ny telo ary MD kosa ny ben’ny Tanànan’i Ialanindro, anisan’ny ho mpiray tendro amin-dRazaimamonjy Claudine. Nialoha izany ny nampidirana am-ponja io tale io nefa izao nivoaka izao sahady.